बालुवाटार बैठकमा हरेक दिन किन फेरियो कुर्सी ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
बालुवाटार बैठकमा हरेक दिन किन फेरियो कुर्सी ?
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा नेताको बोलीको जति चर्चा छ कुर्सीको पनि चर्चा उत्तिकै छ।
अन्नपूर्ण पोष्टमा बुधबार छापिएको खबर अनुसार असार १० मा बसेको पहिलो बैठकमा अध्यक्षद्वयलाई सोफामा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो। पहिलो दिन वरिष्ठ नेता र सचिवालय सदस्यलाई सामान्य कुर्सीमा राखिएको थियो। सर्वहाराहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा अध्यक्षलाई सोफा र अन्य नेतालाई कुर्सी भन्दै चर्को आलोचना हुँदा पहिलो दिन सोफामा बसेका अध्यक्ष दोस्रो दिन कुर्सीमा पुगे।
बैठकमा कुर्सीको विरोध भएपछि दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष बस्ने सोफा हटाएर कुर्सी राखियो। तेस्रो दिन अर्थात् १३ गतेको बैठकमासमेत तिनै कुर्सी र त्यही संरचनालाई निरन्तरता दिइयो।
सोझा हटाइए पनि दुवै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता तथा पदाधिकारी मञ्चमै बसे। अन्य स्थायी कमिटी सदस्य भने हलमा डेस्क बेन्चमै बसेका थिए। मंगलबार अर्थात् बैठकको चौथो दिन भने अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीलाई समेत हलमा कुर्सीको व्यवस्थापन गरियो।
सोही व्यवस्थापन अनुसार मंगलबारको बैठकमा अध्यक्षसहित वरिष्ठ नेता हलमै झरेर बसे। चार दिनसम्म बैठकमा कुर्सी र नेताहरुको आसनसमेत व्यवस्थापन हुन नसक्नुले पार्टीभित्रको खटपटलाई सार्वजनिक गरिरहेको छ।